Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း
ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကိုပင် စင်ပြိုင်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်	တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၀၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်	ဖနိဒါ	ဒေသန္တရသတင်း	ပုံမှန်လုပ်နေကြ ရွေးကောက်ပွဲက အတိုက်အခံ စင်ပြိုင်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကိုပင် ပြန်လည်ရွေးချယ် လိုက်ကြသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ (အန်စီဂျီယူဘီ) ၏ အကြီးအကဲကို ....
ရွှေပေါက်ကံစက်မှုဇုန်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား	စနေနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၃၉ မိနစ်	ပြည်တွင်းသတင်း	ရွှေပေါက်ကံစက်မှုဇုန်တွင် သောကြာနေ့ည ၁၀ နာရီခန့်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ရာ စက်ရုံနှစ်ခု လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ်၊ ရွှေပေါက်ကံစက်မှုဇုန် ကနောင်မင်းသားလမ်းနှင့် ဗိုလ်တေဇလမ်းကြားရှိ အမှတ်(၃၃၂) ကနောင်မင်းသားလမ်း မြန်မာပြည်သား မြန်မာ့အစားအစာ စက်ရုံ၊ ...
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအရေး တရားမျှတမှုရှိသင့်ဟု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ တောင်းဆို	သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၄ မိနစ်	ဇာနည်	ဒေသန္တရသတင်း	ထိုင်းအစိုးရ၏ တရားမ၀င် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းသွားမည့် လုပ်ငန်းများသည် တရားမျှတမှု ရှိသင့်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် အဖွဲ့များကို ၀န်ကြီးဌာနများက စာရင်းကောက် သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၉ မိနစ်	မြင့်မောင်	၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ	၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်နှင့် လုပ်ဆောင်တိုးတက်မှုကို စစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များက စာရင်းကောက်ယူ မှတ်တမ်းတင်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ကုလ ကိုယ်စားလှယ် ဂမ်ဘာရီ မကြာမီ မြန်မာပြည် လာဦးမည် သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၀ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ	မြန်မာနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားသည်။
မြန်မာအလုပ်သမား ၁၇ ဦးကို လူမိုက်များက ခြိမ်းခြောက်	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၅၆ မိနစ်	ဒေသန္တရသတင်း	မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ မြန်မာလုပ်သား ၁၇ ဦးသည် အချိန်ပိုကြေးပေးရန် တောင်းဆိုနေစဉ် အလုပ်ရှင်က လူမိုက်များ စေလွှတ်ကာ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားများက ပြော ...
မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပေါ် တရုတ်၏ သြဇာမှေးမှိန်သွားပြီလော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၃၄ မိနစ်	ဒေသန္တရသတင်း	မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခိုင်မာဆုံးမဟာမိတ် တရုတ်နိုင်ငံသည် အုပ်ချုပ်သူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပေါ် သြဇာရှိသည့် တခုတည်းသော နိုင်ငံဟု နိုင်ငံတကာက ထင်မှတ်သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည် သူတို့၏ အကိုကြီး တရုတ်နိုင်ငံက ပြောသည်ကို လိုက်မလုပ် ...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ရိုဟင်ဂျာများအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမည် အင်္ဂါနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၇ မိနစ်	ဒေသန္တရသတင်း	ထိုင်းရေတပ်က မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ရိုဟင်ဂျာ ၄၀၀ ခန့်အား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ပြုလုပ်သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးကာ လိုက်လံဖြေရှင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ်က ထိုင်းလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များကို ကတိပြုလိုက် ...
အရေးတကြီး ဖြည့်ဆည်းရမယ့် ကွက်လပ် တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၂ မိနစ်	၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ	ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ဖြစ်စဉ်တလျှောက်မှာ ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှု၊ သပိတ်တိုက်ပွဲ၊ အလုပ်သမားသပိတ် အုံကြွမှုတွေအများကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု တိုက်ပွဲတွေက များခဲ့ ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် အလွန်ကာလသို့ တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၇ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ	(အင်တာဗျူး) မြန်မာစစ်အစိုးရ ကျင်းပမည်ဆိုသော ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနှင့် ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင် သွားမည့်သူများ ရှိနေသလို၊ ပါတီထောင်ကာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အောင်နိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်လှုပ်ရှားနေသူများလည်း ပြည်တွင်း၌ ရှိနေသည်။
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 663 စုစုပေါင်း 814	ကြော်ငြာ
We have 51 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved